MediaLight बनाम Lumadoodle: मुख्य भिन्नता - MediaLight बायस प्रकाश
MediaLight बनाम Lumadoodle: मुख्य भिन्नता
मैले भर्खर तपाईको वेबसाइट भेट्टाए। म एक Lumadoodle बाट आउँदैछु कि मैले बिगारें जब मैले नयाँ अपार्टमेन्टमा सर्दा। तपाईको बत्ती बढी खर्च भएको किन कुनै कारण छ? जस्तो तपाई मलाई वास्तविक डाटा देखाउन सक्नुहुन्छ?
तपाईंको सन्देशका लागि धन्यबाद र ढिलाइ भएको प्रतिक्रिया माफ गर्नुहोस्। हामी त्यो प्रश्न धेरै प्राप्त गर्दछौं। म प्राय: मेरो आफ्नै प्रश्नको साथ जवाफ दिन्छु:
के तपाईं पैसा बचत गर्दै हुनुहुन्छ यदि तपाईंले एक उत्पादन किन्नुभयो जसले त्यसो गर्दैन कि गर्दैन?
हामी कम लागतमा पूर्वाग्रह लाइटहरू बनाउँदछौं जसको लागत लगभग Lumadoodle को रूपमा हुन्छ, जबकि व्यावसायिक-स्तर सटीकता, अब लामो वारेन्टी र अधिक कनेक्टिभिटी विकल्पहरू प्रदान गर्दछौं।
त्यसोभए, यदि तपाईं अधिक उपयुक्त तुलना गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने, म लुमाडललाई नयाँ ब्रान्डसँग तुलना गर्नेछु LX1 बायस प्रकाश उही मिडियालाइट टीमबाट।
कम सीआरआई (75 XNUMX रा मात्र) क्याम्पिंग एलईडी स्ट्रिप लिनु भन्दा “प्लास्टिकको ट्यूब हटाएर पछाडि एउटा स्टिकर राख्नु भन्दा पनि सटीक पूर्वाग्रह प्रकाश बनाउनु” हुन्छ। Lumadoodle को रूप मा तपाइँ विश्वास गर्न चाहानुहुन्छ.
यदि तपाईं टिभी छविमा नकारात्मक असर पार्न चाहनुहुन्न भने सीआरआई (कलर रेन्डरिंग सूचकांक), क्रोमेटिटी र एम्बियन्ट प्रकाशको स्पेक्ट्रल पावर वितरणको लागि मापदण्डहरू छन् जुन पछ्याउनुपर्नेछ।
हाम्रो कम्पनीले सात बर्षसम्म हाम्रा उत्पादनहरूको शुद्धता र सुविधाहरू सुधार गरेको छ जबकि उनीहरूमा सुधार भएको छैन, र हामीलाई थाहा छ कि अझै सुधारको लागि ठाउँ छ, त्यसैले हामी सधैं अर्को पुनरावृत्तिमा काम गरिरहेका छौं। यसैले मिडियालाइट उत्पादनहरू भिडियो स्टुडियो र पोस्ट उत्पादन सुविधाहरूमा भिडियो पेशेवरहरूले प्रयोग गर्दछन्।
यो भनेको बिना नै गइन्छ, तर हामी लुमाडडल, गोवे, अन्टेक, जाबिकी वा अरू कसैसँग सम्बन्धित छैनौं। जे भए पनि यसले रायलाई बेवास्ता गर्दछ र स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक डाटा र शारीरिक डिजाइनमा केन्द्रित गर्दछ।
तर, तपाइँको प्रश्नमा फर्कनुहोस्। म एक विस्तृत प्रतिक्रिया पठाउन सक्षम हुन चाहान्थे वास्तविक डाटा, त्यसैले मैले भर्खर नयाँ Lumadoodle एकाइलाई अर्डर गरें र यसलाई सेकोनिक C7000 अन्तर्गत नाप्यो।
सर्वप्रथम, तिनीहरूको सम्बन्धित प्याकेजि ofबाट स्ट्रिपहरू निकाल्नुहोस् र मिडियालाइटको छेउमा लुमाडडललाई हेरौं। तपाईंले याद गर्नु भएको पहिलो कुरा भनेको मिडियालाइटसँग बढी एलईडी छ। एक m ​​मी Lumadoodle पट्टी5एलईडी छ। उही लम्बाइको मिडियालाइटमा १ LED० एलईडी छ। मिडियालाइट प्रति मिटरमा .90 150% बढी एलईडीहरू छन्।
Lumadoodle र MediaLight तुलना गर्दै
मिडियालाइटमा चिप्सको एलईडी मात्राको आधारमा% 66% बढी खर्च हुनेछ यदि कम उपज, उच्च शुद्धता एसएमडी चिप्स उत्पादन गर्न अधिक खर्च भएन भने। तथ्य हो, तिनीहरूले लागत कमसेकम प्रति एलईडी २० गुणा बढी।
पूर्वाग्रह प्रकाश LED गुणस्तरको तुलना
पहिले, मलाई मात्र भन्न दिनुहोस् कि यो एक सेब-देखि-स्याउ तुलना छैन।
मिडियालाइट इमेजिंग विज्ञान पेशेवरहरू द्वारा डिजाइन गरिएको हो र Lumadoodle छैन। मिडियालाइटले कस्टम कलरग्रेड Mk2 चिपहरू समावेश गर्दछ र लुमाडलले गर्दैन। त्यो त्यहाँ काम गर्ने मानिसहरूलाई दस्तक दिनु हुँदैन, किनभने तिनीहरू धेरै राम्रा मानिसहरू हुन्, उनीहरूले आफ्नो उत्पादनहरू बनाउँदा छवि गुणवत्तालाई ध्यान दिँदैनन् र यसका बारे धेरै इमान्दार छन्। हामी यसलाई कम्पनीहरूमा रुचि दिन्छौं जुन कम गुणवत्ताको एलईडीहरू पनि बिक्री गरिरहेका छन् तर सही भएको दाबी गर्दै।
मैले केहि बर्ष पहिले लुमाडललाई परीक्षण गरेँ र मैले धेरै टेक्नोलोजीको साथमा पनि विश्वास गरें कि त्यसदेखि त्यहाँ वृद्धिशील सुधार हुने थियो। वास्तविकतामा, सीआरआई (रंग रेन्डरिंग सूचकांक) अझै कम छ यद्यपि एलईडी टेक्नोलोजी पछिल्ला years बर्षमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ।
Lumadoodle रंग रेन्डरिंग सूचकांक (CRI) = .76.3 XNUMX..XNUMX रा (कमी)
मिडियालाइट कलर रेन्डरिंग सूचकांक (सीआरआई) ≥ Ra Ra रा
यसको विपरीत, पहिलो (पोस्ट-बेटा टेस्ट) २०१ Media मा बेचिएको मिडियालाइटमा of १ को (अब---2015 रा) सिआरआई प्रस्तुत गरियो। तर, २०१ 91 को मेडियालाइट पनि आजको लुमाडल भन्दा धेरै उच्च सीआरआई थियो।
नयाँ स्ट्रिप अघिल्लो पट्टी भन्दा न्यानो मापन गरियो, जसको लागि तपाईं अझै मेरो मापन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 2017 बाट, तर अझै उचित रूपमा 6000K (6500K सन्दर्भ मानक विरूद्ध) तिनीहरूको विज्ञापन गरिएको सीसीटीको नजिक।
मेरो मतलब के हो उचित रूपमा बन्द?
पूर्वाग्रह प्रकाशको संसार जंगली पश्चिम हो। त्यहाँ धेरै कडा उद्योग मानकहरू छन्, तर केहि तिनीहरूलाई अनुसरण गर्दछ।
हामी ISF द्वारा स्वतन्त्र प्रमाणीकरणका लागि हाम्रा उत्पादनहरू सबमिट गर्दछौं, जबकि प्राय जसो कम्पनीहरूले प्याकेजमा "6500K" मात्र प्रिन्ट गर्दछ, वा "शुद्ध सेतो", वा "साँचो सेतो"। मैले एक पटक परीक्षण गर्न एउटा किन् जुन प्याकेजमा "खुशीको सेतो" भन्यो। 😁
दुई सबैभन्दा खराब अपराधीहरू भने भान्सकी र एन्टेक थिए। तिनीहरू यति खराब थिए कि तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न वास्तवमा चोट पुर्‍यायो। यदि तपाईं कहिले सीँढीमा वा पार्कि dec डेकमा क्रिप्पी, कठोर बत्तीहरू सहित हिंड्नुभयो भने, तपाईंलाई मेरो मतलब के हो भनेर थाहा छ।
भान्स्की बायस लाइट्स आफ्नो वेबसाइटमा 6500K को एक रंग तापमान दाबी गर्‍यो तर करीव २०,००० मा मापन गरियो
अन्टेक बायस प्रकाश उनीहरूको वेबसाईटमा उनीहरूको बत्तीहरू "6500K लाई ठीकसँग क्यालिब्रेट गरिएको थियो" तर तिनीहरूले भने ,54,000 XNUMX,००० मा मापन गरियो। यो शुगर कोटमा जाँदै थिएन, तिनीहरू भयrible्कर थिए।
यो परिचय फेर्दै जाबीकी र हेलो बायस प्रकाश तिनीहरू आफ्नै अधिकारमा पनि एकदमै क्रुप थिए, तर, सौभाग्यवस, तिनीहरू पहिले नै व्यवसायबाट बाहिर गए, त्यसैले म तिनीहरूलाई अब फेरि समीक्षा गर्न आवश्यक छैन।
त्यसो भए, छोटो उत्तर यो हो कि यसले बढी प्रकाशको कारण मिडियालाइट निर्माण गर्न बढी लागत दिन्छ, जो आफैं उच्च गुणस्तरका हुन्छन् - "सन्दर्भ मापदण्ड" निर्माण गर्न निर्माण गरिएको छ, साथै अन्य कम्पोनेन्टको गुच्छा जुन तपाईं एलईडी पट्टी बनाउन आवश्यक छ। पूर्ण-कार्यात्मक पूर्वाग्रह प्रकाश:
RI of को सट्टा ≥ 98 C को CRI (पूर्वाग्रह लाइटहरू an ० को एक पूर्ण न्यूनतम हुनुपर्दछ)
कडा बेनिंग सहिष्णुता (K० केके भित्र 50००० के भित्र)
शुद्ध तामा पीसीबी निर्माण
धेरै अतिरिक्तहरू जुन तपाईंलाई अन्य बत्तीहरूसँग अलग किन्नु पर्छ (अर्थात् dimmer र रिमोट, एडाप्टर, अन / अफ टगल, एक्स्टेन्सन कर्ड, तार रूटिंग क्लिपहरू)।
के मैले प्रति पट्टी .66.66 XNUMX% बढी एलईडी उल्लेख गरे?
I प्रतिज्ञा कि म चाँडै कच्चा फोटोमेट्रिक डाटामा प्रवेश गर्न जाँदैछु। तर मैले गर्नु अघि, त्यहाँ लुमाडुडल ब्रान्डि oneको एउटा गोलमिलाउने अंश छ जसले धेरै भ्रम पैदा गर्दछ, र जसले मलाई धेरै ईमेल र वेब च्याटको परिणाम दिन्छ।
मैले लुमाडाडल प्रो जाँच गरेन किनकि यदि तिनीहरू आफ्नो सेता बत्तीहरू भन्दा खराबको कल्पना प्रकाशित गर्नमा खुशी छन् भने, यो मेरो लागि पर्याप्त छ। जे भए पनि, यदि तपाईं यस ईमेलबाट केवल एउटा मात्र सिक्नुहुन्छ: "र changing्ग परिवर्तन गर्ने पूर्वाग्रह प्रकाश र रंग रu्ग मिसाउँदैन।
सबै मिडियालाइट स्ट्रिपहरू D65 सेतो सिमुलेट गरिएका छन्। तिनीहरूले रंगहरू परिवर्तन गर्दैनन्।
तसर्थ, हाम्रो तुलना MediaLight Mk2 र सेतो लुमाडडल बीच छ।
यहाँ .ssv ढाँचा मा कच्चा डाटा छ प्रकाश दुबै पट्टिहरु मा Sekonic C7000 का साथ मापन को लागी एक कोठा मा मुन्सेल N18 र paint लगाई कोठा मा एक १%% खैरो कार्ड बाट लिएको छ। (तपाईंले अन्य पृष्ठहरूमा हाम्रो एकीकृत क्षेत्र देख्नु भएको हुन सक्छ। हामी यसलाई व्यक्तिगत एलईडी, बल्ब र बत्तीहरू टाउकोको लागि परीक्षण गर्न प्रयोग गर्दछौं, भेला गरिएको स्ट्रिपहरू होइन)।
माथि मापन १ मीटर लम्बाई LED स्ट्रिपको साथ लिइएको थियो।
मिडियालाइट र लुमाडल सुविधाहरू तुलना गर्दै
मिडियालाइट एक डिमर समावेश गर्दछ। लुमाडाडलले उनीहरूको सेतो मोडेलको लागि डिमर समावेश गर्दैन (पूर्वाग्रह प्रकाश D65 सेतो हुनुपर्दछ, त्यसैले यो हामी तुलना गर्दैछौं), तर तपाईं लगभग approximately १२ को लागि खरीद गर्न सक्नुहुनेछ।
मिडियालाइटमा अन / अफ स्विच सामेल छ। Lumadoodle छैन। यदि तपाईंको टिभीमा युएसबी पोर्ट टिभीको साथ बन्द हुँदैन भने, तपाईंलाई अनप्लग गर्न निर्देशन दिइन्छ।
मिडियालाइटको डिम्मर र रिमोटले हार्मोनि रिमोट वा आईआर युनिभर्सल रिमोटसँग कार्य गर्दछ, लुमाडलले डिमर समावेश गर्दैन र बिक्रीको लागि उपलब्ध इकाई हार्मोनी वा आईआर युनिभर्सल रिमोट कम्प्याटिवल छैन।
मिडियालाइटले उत्तम चालकता र तातो सिink्क क्षमताहरूको लागि शुद्ध तामा पीसीबी (मिश्र-डूबा) प्रयोग गर्दछ, लुमाडाडलले गर्दैन।
मिडियालाइटले एक एडाप्टर समावेश गर्दछ (उत्तर अमेरिकी मात्र), लुमाडलले गर्दैन।
मिडियालाइटले Year बर्षे वारेन्टी, र लुमाडल वारेन्टी १ बर्ष समावेश गर्दछ।
मिडियालाइटले र colors्ग परिवर्तन गर्दैन र लुमाडलले बिभिन्न रंगका साथ मोडल बनाउँदछ। यदि तपाइँ रंगहरू परिवर्तन गर्न चाहानुहुन्छ, लुमाडल एक राम्रो विकल्प हो। जबकि, र color परिवर्तन गर्ने बत्तीहरूले र color्ग-क्रिटिकल अवलोकनको लागि स्क्रिनमा छविलाई नराम्रो प्रभाव पार्दछ। नतिजाको रूपमा, मिडियालाइटले तिनीहरूलाई प्रस्ताव गर्दैन।
मिडियालाइट इमेजि Science विज्ञान फाउन्डेशन द्वारा सटीकताको लागि प्रमाणित छ र र color्कात्मक महत्वपूर्ण भिडियो वातावरणको लागि परिवेशको प्रकाशको लागि SMPTE मानकहरू भन्दा बढी डिजाइन गरिएको हो। Lumadoodle यथोचित नजिक छ उनीहरुलाई लक्षित लक्ष्यहरु 6000००० के र Ra 76 रा, तर यी सन्दर्भ मापदण्डहरू छैनन्।
मिडियालाइट एलईडी अनुकरण गरिएको D65 (6500 के .003 को withuv को साथ - को पुनर्गठित सूर्यको प्रकाश, Δ Ra राको अल्ट्रा-उच्च रंग रेन्डरिंग सूचकांक (सीआरआई) को साथ CIE मानक इलुमिमेनन्ट D65 सँग अनुकूल छ। क्रोम्यामिटी निर्देशांक उल्लेखनीय x = 98, y = 0.3127 मानकको नजिक छन्।
Lumadoodle विज्ञापन एक कम तापमान 6000K (केहि पृष्ठहरु मा) को विज्ञापन गर्दछ र हाम्रो मापन यो सहन। तिनीहरू 6500 5600०० के भन्दा न्यानो छन् (यस नमूनाको लागि 76K०० के बारे मा)। Lumadoodle को color color को रंग रेन्डरिंग अनुक्रमणिका तल छ SMPTE सिफारिश गरीयो न्यूनतम मान 90 ० रा।
वस्तुनिष्ठ रूपमा भन्नुपर्दा, उच्च सीआरआई लाइटहरू कम सीआरआई लाइटहरू भन्दा बढि सही छन्, र image 76 सही छवि प्रजननको लागि दहको मुनि छ।
मिडियालाइटको R of of को एक R9 (गहिरो रातो) मूल्य छ। लुमाडलको नकारात्मक R97 मान छ। यसको मतलब लुमाडाडलको स्पेक्ट्रममा गहिरो रातो छैन, कम्तिमा स्पेक्ट्रममा अन्य र colorsहरूसँग सम्बन्धित छैन।
गहन रातो (R9) प्रकाश हाम्रो छालाको तल रगत प्रवाहको कारण सही छाला टोनहरूको लागि महत्त्वपूर्ण छ। (यसले ट्रान्समिसिभ प्रदर्शनको साथ पनि प्रभाव पार्दछ, जे भए पनि प्रभाव उल्टो हुन्छ)। यसले यो पनि बुझाउँदछ कि बत्तीहरूले किन हरियो / निलो कास्ट उच्च सीआरआई बत्तीको तुलनामा गर्छ। प्रकाशमा निलो र पहेंलो चुचुराहरू छन्।
स्पेक्ट्रल पावर वितरण र MediaLight Mk2 को CRI
स्पेक्ट्रल पावर डिस्ट्रिब्युसन र लुमाडुडलको सीआरआई
यो दुई प्रकाश स्रोतको वर्णक्रम शक्ति वितरण बीच भिन्नता कल्पना गर्न चुनौती हुन सक्छ, त्यसैले हामी रेखांकन ओभरल्याप गर्नेछौं। Lumadoodle को लागी वर्णक्रमीय विद्युत वितरण MediaLight Mk2 को अगाडि सुपरिम्पोज्ड छ। Lumadoodle कालो बोर्डरको साथ पारदर्शी सेतोको रूपमा देखा पर्दछ र MediaLight Mk2 रंगमा देखा पर्दछ।
हामी हेर्दछौं कि Lumadoodle पहेंलो फास्फोरस (580० एनएमको चोटी तरंगदैर्खेको साथ फास्फोरस) नीलो emitter सँग मिसाएर सेतो सिर्जना गर्दछ। लुमाडाडल नमूनामा कुनै रातो वा हरियो शिखर छैन (तपाईं कम CRI सेतो बत्ती बनाउन सक्नुहुनेछ प्रकाशको दुई र colorsहरू - पहेंलो र निलोको संयोजन गरेर)।
तपाईं MediaLight Mk2 को लागी छुट्टै हरियो र रातो चुचुरोहरू देख्न सक्नुहुनेछ र ग्राफमा बोल्दा र lookहरू लुमाडडल स्पेक्ट्रमबाट हराएको र represent्गलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहोस्। सेतो "माउन्टेनटोप" ले लुमाडडलमा पहेलो फस्फोरसको चरम उर्जा स्तर प्रतिनिधित्व गर्दछ।
मिडियालाइटले पहेलो शिखर समावेश गर्दैन किनकि चौडा र साँघुरो ब्यान्ड रातो र हरियो फस्फोरसको संयोजन नीलो इमिटरको साथ मिडियालाइट Mk2 एसपीडीलाई D65, वा "सिमुलेटेड डी 65" को नजीक आकृति दिन्छ।
जबकि यो तुलना उनीहरूको प्रतिस्पर्धीबाट आउँदैछ, बजारमा केहि उत्पादनहरूको विपरीत, लुमाडलले सटीकताका लागि डिजाइन गरिएको दाबी गर्दैन, र यसको मूल्य मिडियालाइटको मूल्य भन्दा कम छ, यद्यपि यो समान वस्तु एलईडी स्ट्रिपहरू भन्दा कम आवश्यक छैन। कम्पनीहरूसँग तुलना गर्नुहोस् जसले उनीहरूलाई डेलिभर गर्छन् भन्दा बढी कसम दिन्छ तिनीहरू of 76 को CRI प्रोमिसन गर्दैछन् र यही कुरा तपाईले पाउनुहुन्छ।
लागत पक्कै पनि एक कारक हो र उत्तम पूर्वाग्रह बत्तीहरूले पनि गलत सेटिंग्सको साथ खराब टिभी बचत गर्दैन।
हामी ती मानिसहरूलाई बेच्न चाहँदैनौं जसलाई आवश्यक छैन वा शुद्धता चाहँदैन। त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू छन् जुन सिधै बक्स बाहिर टिभीहरू प्रयोग गरिरहेका मानिसहरू भन्दा त्यहाँ छन् जसले उनीहरूको प्रदर्शनहरू क्यालिब्रेट गर्छन्।
हामी आशा गर्दछौं, तथापि, हामीले यो देखाइरहेका छौं कि किन हाम्रा उत्पादनहरूको निर्माणको लागि अधिक मूल्य लाग्छ ताकि तपाईं कुन उत्पाद तपाईंको लागि सही छ भनेर निर्णय गर्न सक्नुहुनेछ।
यहाँ Lumadoodle को संस्थापकहरु छन् उनीहरूको पूर्वाग्रह प्रकाश उत्पादनहरूको बारेमा कुरा गर्दै र उनीहरूको कसरी फरक फोकस छ। यो असामान्य छैन। पूर्वाग्रह लाइटको रूपमा बेचेको प्राय: एलईडी कमोडिटी एलईडी पट्टिहरू हुन् जुन विभिन्न उद्देश्यका लागि डिजाइन गरिएको छ, जस्तै पाल टाँको।
हाम्रो बत्तीहरूले डरलाग्दो तम्बु बत्तीहरू बनाउँदछ, तर ती अपवादहरू हुन्। यद्यपि त्यहाँ त्यस्ता परिस्थितिहरू छन् जहाँ शुद्धताले खास फरक पार्दैन, र शुद्धताको लागि भुक्तान गर्न अतिरिक्त लागतको लायक हुँदैन। तपाईले कहिले पनि चीज किन्नु पर्दैन जुन तपाईलाई आवश्यक नभएका सुविधाहरूको लागि भुक्तानी गर्न तपाईले बढि मूल्य तिर्नु पर्दैन।
यदि तपाइँ तपाइँको टिभी क्यालिब्रेट गर्नुहुन्छ भने, गलत बत्तीहरू प्रभावकारी ढ it्गले यसलाई दर्शकको दृष्टिकोणबाट निर्धारण गर्नुहोस्। MediaLight र Lumadoodle को chromaticity र र re्ग रेन्डरिंग बीचको ज्ञानेन्द्रिय भिन्नता, प्रायः जसो केसहरुमा, तपाइँले आफ्नो प्रदर्शनमा बनाउने ट्वीक भन्दा धेरै चरम हुनुहुन्छ, र बत्तीहरूले भिजुअल सेतो पोइन्ट सन्दर्भ प्रदान गर्दछ, र color्ग तापमानमा परिवर्तन पाइएको। र टिन्ट फरक छ।
यदि अवलोकन वातावरणमा वातावरणीय प्रकाश एकदमै न्यानो छ र Δv जो धेरै उच्च छ भने, यो सिमुलेटेड D65 प्रकाश भन्दा हरियो र तातो देखिन्छ। नतिजाको रूपमा, टिभीले D65 भन्दा बढि म्याजेन्टा र चिसो देख्नेछ, यो क्यालिब्रेट भए पनि।
र यथार्थता फरक बिना पनि, त्यहाँ अन्य चीजहरू छन् जुन तपाईं लुमाडडलमा थप्न चाहानुहुन्छ यसलाई मूल्यको आधारमा स्याउ-देखि-स्याउ तुलना गर्न, यी वस्तुहरूमा रिमोट कन्ट्रोल, एक डिमर समावेश छ (पूर्वाग्रह लाइटहरू प्रदर्शनको अधिकतम चमकको १०% मा सेट गर्नुहोस्, त्यसैले तपाईंलाई डिमरको आवश्यकता छ) एसी एडाप्टर, एक्स्टेन्सन कर्ड, उच्च एलईडी घनत्व र धेरै लामो वारेन्टी अवधि। सामानहरू थपेमा मूल्य दूरी एकदमै कम हुन्छ।
कुञ्जी व्यापार अफ सटीकता विरूद्ध लागत को एक हो। यदि तपाईंलाई आवश्यक पर्ने सटीकता प्राप्त गर्नुहुन्न भने, तपाईंले कम मूल्य भए पनि, सायद धेरै तिर्नु भयो। र, यदि तपाईंलाई सटिकताको आवश्यकता छैन भने, तपाईं यस पृष्ठमा समीक्षा गरिएका उत्पादनहरू मध्ये कुनैको भन्दा सस्तो उत्पादनको साथ राम्रो हुन सक्नुहुनेछ।
त्यो चाखलाग्दो तुलना थियो। तपाईं कुन बत्तीहरू अर्को मापन भएको हेर्न चाहानुहुन्छ?